Xog la Helay: RW Xasan Cali Kheyre oo is Casilaya isuna soo Taagaya Doorashada Madaxweynenimo ee 2020/21. | SMC
Home WARARKA MAANTA Xog la Helay: RW Xasan Cali Kheyre oo is Casilaya isuna soo...
Xog la Helay: RW Xasan Cali Kheyre oo is Casilaya isuna soo Taagaya Doorashada Madaxweynenimo ee 2020/21.
Warar ku dhadhow RW Xasan Cali Kheyre ayaa sheegaya inuu ku jiro isu diyaarin ah inuu isu soo taago tartanka doorashada Madaxweynenimo ee 2020/21 haddiiba doorasho la qabto. Xasan Kheyre oo runtii ku fashilay hawshii hogaaminta xukuumadda, tan oo xukuumaddiisa ka dhigeysa tiii ugu waqtiga dhereyd xukuumadihii dalka soo maray intii la soo dhisay dowladdaan ayaa haddana waxay ka dhigeysaa tii ugu liidatay xukuumadahaas oo dhan.
Maxaa uu ka qabtay Ammaanka Xasan Kheyre?
RW Xasan Kheyre markii la magacaabayey April 2017 Shabaab waxay joogeen keymaha fog dhexdooda ee meel magaalo ah ma soo istaagi Karin haddana waxy gudaha ugu jiraan xaruunta madaxtooyada, dekada iyo Garoonka Aden Cadde iyo Suuqyada magaalada oo ay canshuuraha si dhib yaraan ah uga qaataan, kadib sida soo baxeysa inuu la heeshiiyey ina adeerkii Cali Maxamuud Raage -Sh Cali Dheere oo u xaqijiyey inaan wax badan laga halleyn doonin haddii ay shabaabka canshuuraha ka qaadan karaan badeecadaha badda iyo Berrigaba ee Xamar, waana la fuliyey heshiiskaas.
Xaaladda Xamar Markii uu Kheyre Yimid 2017
Akhristow RW Kheyre markii la magacaabayey intaan Huriwaa ka soo toosno oo ah halka uu waagu noogu baryi jiray ayaan Sanca ka quraacan jirnay, kadib ayaan qadada Liido u doonan jirnay, kadibna casiriyaheennu wuxuu ahaa Hotel Jaziira oo aan ku shaahi jirnay ilaa gor dambe, ballanta cashadana waxay noo ahaan jirtay Cisbitaalkii hore ee digfeer agagaarkiisa.
Laakiin Sida hadda la ogyahay xaalku waa inay Xamar noo qeybsan tahay oo aan kala degannahay laba magaalo oo isku dheggan oo kale, lana kala yiraahdo dhinaca dowladda iyo dhinaca kale oo wadada wadnaha ayaa Khadka cagaaran uu noo yaallaa.
Haddaba RW Xasan Cali Kheyre oo intaas oo shaqo xumo muujiyey ayaa waxaa uu damciisu yahay inuu u soo hanqal taago madaxweynenimo dalka
Masuqmaasuqa iyo Kheyre
Guuda ahaan musuqmaasuqa dalka ka jiraa waxaa u sabab ah kheyre oo xataa saami ku leh dhaxaanta Xamar lagu jaraa jidadka oo askari ahaa loo siiyo mushaar $500 ah bishii sida u sheegau afahayeekii hore wasaaradda Aminiga.
Lakiin RW Kheyre waxaa uu u fiican yahay oo Jeceyl dalalka Norway iyo Qata oo a dalalka dhibaatada xoogga leh nagu haya waqtigaan ee raba inay xaraashtaan shidaalkeena. Dalka Qatar ayaa hadda u muuqda inay Xasan Kheyre u qaateen inuu noqodo ninka ay ku towfiiqayaan oo ku hawlgali doonaan doorashada soo socota.
RW Kheyre oo dhawaan is casilaya
Kheyre waxaa uu asxaabtiisa u sheegay inuusan sameyn doonin khaladkii ay galeen Cumar Cabdurashiid iyo Cawdiweli Cali Gaas oo is sharraxy iyagoo wali kasii mid ah dowladda, kadibna iyaga iyo madaxweynayaashiiba la isla tuuray. Sidaas darted waxaa uu si degdeg ah uga bixi doonaa dowladda Farmajo. Sidoo kale Kheyre waxay Qatar kula talisay inuu dowladda ka baxo sida ugu dhakhsaha badan ka hor, sannadka ugu dambeeya oo la hubo haddii doorasho la aadayo in waxayaabo badan ay isa soo xerxeri doonaan sannadkaas oo ay bannaanka u soo bixi doonaan dhamman wixii ka dhashay musuqmaasuqii xaddhaafka ahaa ee muddo la dadayey iyo dhammaan khaldaadkii ay dowladiisu gashay, dadkii la laayey, kuwii loo dhiibay cadow iyo burburinta maamul goboleedyadii dhisanaa markii uu yimid.
Xasan Kheyre, Fahad iyo Qatar waxay rabaan in dhamaan eedaha ka soo bixi doona burburka dhaqaale, kan dhaqan( Fisqiga iyo Foolxumada hoteelada Xamar yaalla hadda), kan diineed, kan akhlaaqeed iyo ka ammaanka ee dalka loogeystay intii talada hayey uu yarbaa RW Kheyte inuu ka noqdo nadiif oo uu yiraahdo mudaadii aan joogay wax badan ayaa qabtay, laakiin sannadkii aan ka tagay ayey dowladdu sameysaay khaldaadkan, kuwii horana madaxweynaha ayaa ka mas’auul ahaa.
Waxaa uu sugayaa oo kaliya labadaan arrimood oo uu guul ku sheegan karo:
Inta uu balamaanka ka ansixinayo sharciga doorashooyinka oo hadda horyaalla
Inta meel laga saarayo deyn khafiifinta (Debt Relief not Debt write-off), maaha sida beenta ah “Deyn Cafin” oo ay Wasiir BB iyo Kheyre u sheegaan tan oo ay si xoog le u wadaan Qatar iyo Norwau si dalka loo geliyo deyn aad uga badan tan hadda lagu leeyahay sida Angola iyo Cameruun oo hadda lagu leeyay ku dhowaad midkiiba $50 Bilyan iyo shidaalkoodii oo xaaluf ku dhow.
Si kheyre uu labadaan uga dhigto guulo uu isaga keenay oo ay tahay in lagu doorto, kadibna guuldarrada sannadka ugu dambeeya imaaneysaa loo saariyo in MW Faramajo oo hadda mashquul ku ah inuu jagooyinbadan u sii magacaabo ilma adeeradiis sida Balal Cusman oo arrimaha badda loo magacaabay maadaama uusan soo noqoneyn Farmajo.
Kheyre waxaa u qorsheysan sidii uu saaxibbo ku dhow uu ku qarsaday inuu MW Farmajo ku sheego inuu yahay cidda ay wax hagaagi waayeen oo hortaagnaa horumarka dalka.
Dhinaca kale waxaan Iyana aan cidna ka qarsooneyn in Fahad Yasiin oo ah shakhsiga keenay MW Farmajo iyo kuwii ka horreeyey uu hadda suuqa ugu jiro inuu raadsado qof cusub oo uu keensado kuna moodo afarta sano ee soo socota.
Fahad waxaa uu durbaba bilaabay inuu kulamo goonni ah la yeeshay mucaaridka iyo shakhsiyaad kale oo uu kala hadlay bal in lawada shaqeysto. Lama oga inuu Kheyre yahay shakhsi ay dadka dib u aqbali karaan. Fahad waxaa uu awood u leeyahay inuu Qadar ka dhaadhiciyo inay taageerto Kheyre, haddii uu isaga kheyre ku qanco kana dhex arko dantiisa.
Isku soo duub waxaa la hubaa ina Kheyre iyo Farmajoo inay shaatiyada iska jeexjeexi doonaan sannadkan soo socda ee 2020, si fashilka uu dalku galay muddo xeleedkooda uu midba kan kale ugu eedeeyo. Dhinaca kale waxaa Iyana jooga mucaarid uu gunguri weyni ku jiro, inkastoo ay tayaxumo iyo tira badni isku darsadeen haddan dhammaantood waxay dhamaami doonaan Farmajo iyo Kheyre.
Siyaasadda iyo Doorashooyinka Somaliya
Siyaasadda Somaliya waxaa mar waliba haga waa lacag waxaana qodobka ugu muhiimsan ee doorashooyinka uu noqon doonaa kolba cidda ku tiirsan dalka ugu lacag bixin badan. Cidda haysatay wax xoogaa ay dhacday sida Fahad iyo Kheyre.
Qatar waxay taqaanna lacagteeda waxa ay ku rabto iyo cidda u diyaarka ah inay dalbkeeda u fuliso waxayna ka fiican tahay Imaaraadka oo aan iyaga lacagtooda isugu geyn hal qof ee qofba xoogaa ku tuura, iyo sucuudiga iyo Ameerikaanka oo af maran wax ku raba balsa isticmaala dayaacayo iyo dhuudhuujin wixii ay bixin jireen ee taageero ku mgacawnaa, kadibana ay siyaasadeyaan.
Sida laga wada warqabo beesha caalamka, gaar ahaam EU iyo Mareykanka, waxay mushaarooyinkii ay awalba bixin jireen ka goosteen ciidamadii dowladdii Xasan sheekh sannadkii doorashada ee 2016 si mucaaridka ay ugu eedeeyaan in dowladdaas ay bixin weyday mushaarooyinkii ciidamada taas oo ahayd dagaal siyaasadeed oo lala galay dowaldaas si aanay u soo noqon waana lagu guuleystay.
Maxay ku kala duwan yihiin Kheyre iyo Farmajo?
Dadka yaqaannaa Farmaajo waxay ku sheegaan inuusan qof ahaan xumeyn laakiin ay ku culus tahay shaqadaan hogaaminta dal ay wax waliba u baahan yihiin awood iyo aqoon dheeraad ah sida degenaan, dad aqoon,siyaasad la tashi iyo caqli ay waddaniyad hageyso oo qabkiisa hoos u dhiga. Farmajo waxaa la leeyahay waxaa uu soo doontay RW hasa yeeshee waxaa ka dul dhacday madaxweynenimada waana garan la’a yahay dhan uu ula dhaqaaqo.
Xasan Cali Kheyre waa beenlow tuug ah oo si fican u yaqanna sida dadka looga faa’iideysto, malaha aqoon hogaamineed, awood wax fulineed iyo aragti fog oo uu kula sooci karo rabitaankiisa iyo runta hortaalla. Waana dadka ku farxa in la amaano. Dal ba’ayow yaa ku leh?
Previous articleFarmaajo oo Wakiil Gaar ah u magacaabay ina adeerkiis, dacwada Badda kala xaajoonayo Kenya
Next articleRW Kheyre oo ka hor yimid magacaabidda Balal & Khilaaf ka dhashtay